राष्ट्रियताको संरक्षण र समृद्धि मार्गमा लाग्दा बारम्बार हमला : RajdhaniDaily.com
Homeबिचारराष्ट्रियताको संरक्षण र समृद्धि मार्गमा लाग्दा बारम्बार हमला
राष्ट्रियताको संरक्षण र समृद्धि मार्गमा लाग्दा बारम्बार हमला
हामी नयाँ पार्टी जीवनतर्फ अगाडि बढ्दै छौं । अहिलेसम्म विधिवत् पार्टी एकता विभाजित छैन । हामी पार्टी विभाजन गर्न पनि चाहँदैनौं । निर्वाचन हुँदा पार्टी फुट्छ ? निर्वाचन हुँदा पार्टी फुट्नुपर्छ ? झन् एकजुट भएर बढ्नुपर्दैन ? मैले अस्तिको दिन प्रचण्डजीलाई भने हामीले केही मिलाउन सकेनौं, अब निर्वाचनले मिलाउँछ कि ? निर्वाचनमा त हामी एकजुट भएर जानुप¥यो । हाम्रो शक्ति एकजुट भएर निर्वाचनमा लगाउनुप-यो । आपसी अन्तरविरोधहरू टुंग्याउनुप¥यो । अब एकजुट भएर हामी निर्वाचनको काममा अगाडि बढौं । प्रधानमन्त्री बन्नु नै छ भने पनि चुनावबाट बन्ने होला नि त ? प्रधानमन्त्री म चुनावबाट बनेको हुँ । यसले हामीलाई एक ठाउँ पु¥याउँछ । अरू पार्टीहरू पनि सकेसम्म एकजुट हुँदै छन् । चुनावका लागि, चुनावको सामना गर्नका लागि ।
उहाँ (प्रचण्ड–माधव)हरू त मान्नुभएन । उहाँहरू बेग्लै संसारमा, बेग्लै सपनामा, कसले हालेको ब्याट्रीबाट चल्दै हुनुहुन्छ ? कसले दिएको पम्पबाट चल्दै हुनुहुन्छ ? मलाई थाहा छैन । तर उहाँहरू यस धर्तीमा, भूमिमा, धर्तीको जगमा, कार्यकर्ताको जगमा र जनताको विश्वासको जगमा चलिरहनुभएको छैन । अहिलेको आवश्यकताको जगमा उहाँहरू चलिरहनुभएको छैन । अहिले देश र जनताको चाहना परिपूर्ति गर्न उहाँहरू चलिरहनुभएको छैन ।
तपाईंहरूलाई थाहा छ, ममाथि हमला कतिकति खेर हुन्छ ? मेरो आफ्नै जीवनमा, मेरो आफ्नै अनुभवमा भन्ने हो भने जब देशमा निरंकुश राजतन्त्र थियो, पञ्चायती व्यवस्था थियो, अधिनायकवादी शासन थियो, त्यसबेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि हामीले आन्दोलन सुरु ग¥यौं, हमला भयो । मैले आफैं व्यक्तिगत तवरमा पनि झेल्नुपरेको छ भन्ने सुनाउनुछ ।
हामीमाथि हमला कतिबेला भयो भने जतिबेला हामीले जनताका लागि, देशका लागि एउटा निर्णायक आन्दोलनको उद्घोष गरेर अगाडि बढ्यौं, त्यसबेला हमला भयो । त्यसपछिका दिनहरू पनि थुप्रै सम्झन्छु । तर पछिल्लो समयको मात्रै कुरा गरौं ।
नाकाबन्दीका विरुद्ध पनि हामीले संविधान जारी ग¥यौं । संविधान जारी गरेबापत हमला भयो । नाकाबन्दी हामीमाथि लगाइयो । नाकाबन्दीविरुद्ध हामीले डटेर सामना ग¥यौं । त्यसबेला आलोचना र विरोध हामीविरुद्ध केन्द्रित गरियो । देश बर्बाद भयो, नसक्ने ठाउँमा सिङ जुधाउन गयो । छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध बिगा¥यो । हामीले सम्बन्ध बिगारेको थिएन । हामीले त नाकाबन्दी भोगिरहेका थियौं र त्यसका विरुद्ध भोको पेटमा सामना गरिरहेका थियौं । तर, पनि हाम्रो राष्ट्रको सम्मान, सार्वभौम सत्ताका लागि लड्दा देशभित्रै आलोचना गर्ने व्यक्ति थिए । हाम्रै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले एउटा व्यक्तिको दुर्बुद्धिको कारणले, बोल्न नजानेर देश नै अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति भयो, अब नेतृत्व फेर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक ढंगले बोलेर अभियान थाल्नुभयो ।
हामी एउटा देशबाट घेरिएका थियौं । चीनतिरबाट पनि बाटो खोलेपछि त सहिसक्नु नै भएन । तीव्र भयो, हमला । चीनतिरबाट पारवहन र यातायातसम्बन्धी सन्धि भएपछि, चीनतिरका विभिन्न नाकाहरू खोलेपछि, विभिन्न बाटाहरू बनाएपछि, चीनसँग जोड्ने बाटो बनाइयो भनेर हामीमाथि हमला भयो ।हाम्रा दुर्गम ठाउँहरू चीनसँग सिमाना जोडिएका छन् । त्यो दुर्गम ठाउँमा बाटा नबनाएर हामी देशको विकास कसरी गर्न सक्छौं ? त्यसकारण हामीले चीनसँग सम्बन्ध जोड्नैपर्थ्यो। बाटाहरूले जोड्नै पथ्र्याे, हवाई सुविधाले जोड्नै पथ्र्याे । हिमालपार कनेक्टिभिटी सम्बन्ध, आवागमन, त्यो हवाई, दूरसञ्चार या अरू रेलमार्ग, अरू विभिन्न माध्यमबाट खोलौंं । त्यसो भएपछि हाम्राविरुद्ध यति तीव्र हमला भयो कि त्यो सरकार ढलाइछोड्यो ।
म प्रश्न गर्न चाहन्छु, देशका त्यति दृढताका साथ, त्यति स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ, केही हुँदैन क्यारे यो देशमा भन्ने ठाउँमा जनताका सपनाहरू, ओइलाएका सपनाहरू जगाएर, विकासको एउटा लहर चलाएर, राष्ट्रिय भावना जगाएर, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाएर, देशलाई एक लय र एक तालमा समृद्धिको बाटो अगाडि बढाउने त्यो सरकार, त्यति उपलब्धिका साथ अगाडि बढेको सरकार गिराउनेमा हाम्रै पार्टीका नेताहरू भएका र अविश्वासको प्रस्तावमाथि बोल्दा अविश्वासकै प्रस्तावको समर्थनमा पो बोले आफ्नै पार्टीका नेताहरूले । त्यो कुरा पनि मलाई सम्झना छ । हाम्रै सांसदहरूको शिर निहुरिएको थियो, त्यतिबेला । त्यो थाहा छ ।
अब, एउटा परिस्थिति अहिले फेरि यहाँ आयो । हाम्रो देशको सम्पूर्ण भूभाग सामेल गरेर नक्सा छाप्यौं । हामीले अरूको भूभाग सामेल गरेको होइन, हाम्रै भूभाग सामेल गरेर नक्सा छाप्यौं । त्यो नक्सालाई नक्सा मात्रै छापेर, त्यो कुनै पोस्टर होइन । हामीले छापेको राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र भूगोल हो । त्यो भूगोल नक्साबाट समेत बाहिर पारिएको थियो । सुगौली सन्धिपछि हामीले १४६ वर्षसम्म भोगचलन गरेको जमिन, ५८ वर्ष अगाडि कालापानीमा भारतीय फौज बस्यो र त्यसभन्दा उताको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा (बाटामा फौज बसेर ब्लक गरिदिए पछि) उतैको जस्तो गरेर हट्यो ।
देशभक्तिमा के तागत हुन्छ ? राष्ट्रवादमा के तागत हुन्छ ? राष्ट्रिय स्वाभिमानमा के तागत हुन्छ ? त्यो हामी देखाउँछौं ।
एउटा समूह पृथकतावादी राजनीति लिएर हिँडिरहेको थियो । त्यस समूहलाई हामीले संविधानसम्मत राजनीतिक संवैधानिक, शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा, राष्ट्रिय एकताको मूलधारमा ल्याउन सफलता प्राप्त ग¥यौं । त्यसबेला पनि विरोधको सामना गर्नुप¥यो । एउटा पृथकतावादी राजनीतिको अन्त्य गरेर राष्ट्रिय मूलधारको राजनीति अगाडि बढ्दै छ भने त्यसमा मन पोल्नुपर्ने कारण के ? कलेजो जल्नुपर्ने कारण के ? तर, केही मान्छेहरूको मन जल्यो । पृथकतावादको अन्त्य हुँदा रुवावासी गरे केही मान्छेहरू ।हामी देख्न सक्छौं, यसभित्र के होला ? हामी बुझ्न सक्छौं, यसभित्र के होला ? यतिबेला हाम्राविरुद्ध तीव्र हमला छ । म सुन्दै छु केपी ओलीलाई निकाल्नुहुन्छ रे । उहाँहरूले भन्दा १० वर्ष अगाडि पार्टी सदस्यता मैले लिएको होला। एउटा आन्दोलन सुरु गरेर जतिबेला आन्दोलन टुक्राटुक्रा, धुजाधुजामा थियो, त्यसअवस्थामा एकता एकीकरणको अभियान थालेर आएको मलाई आज ‘ताजुब के भने प्रचण्डले मलाई निकालिदिने रे पार्टीबाट । म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी यस्ता कुराहरूमा अल्झिदैनौं ।’
प्रचण्डले पार्टीबाट निकाल्छन् कि, कहाँकहाँबाट निकाल्छन् कि, घरबाट पनि निकाल्छन् कि त्यो उनको कुरा हो । हामी एउटा आन्दोलनमा छौं, हामीले हाम्रा महान् उद्देश्यहरू तोकेका छौं । हामी समाजवादमा पुग्न चाहन्छौं । त्यसकारण अहिले समाजवादउन्मुख छौं । समाजवाद उन्मुख भनेको लोककल्याणकारी राज्यका अवधारणाअनुसार काम गर्दै सामाजिक न्याय र समानता, सुशासनको बाटोमा अगाडि बढेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने । हामी यस उद्देश्यतर्फ अगाडि बढिरहेका छौं । त्यस उद्देश्यका निम्ति हामीले एउटा सशक्त आन्दोलन निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो आन्दोलन निर्माण, सञ्चालन र ठीक ढंगले अगाडि बढाउन हामीसँग एउटा सशक्त पार्टी चाहिन्छ । त्यो सशक्त पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ, अघि मैले भनेको सही विचारहरू मार्क्सवादी दर्शन, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्त, दर्शन र हामीले लिएको गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्ने मार्गचित्र, त्यसका कार्यक्रम, योजनाका साथ अगाडि बढ्छौं । त्यस्तो गर्नका लागि हामीलाई सशक्त मजबुत, एकताबद्ध र गतिशील पार्टी चाहिन्छ । त्यस्तो पार्टी निर्माणको नयाँ चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौं ।
मैले चुनाव अगाडि भनेको थिएँ, अब वामपन्थीको अत्यधिक बहुमतको सरकार बनाउँछौं । त्यो हामीले ग¥यौं । अब कमरेडहरूमा चिन्ता लाग्ला, त्यो चिन्ता नलिन म आग्रह गर्छु । पुराना पातहरू झर्ने, नयाँ पात पलाउने क्रम भइरहन्छ । हामीले नचाहँदा पनि हुन्छ ।
पार्टी चल्न सक्ने अवस्थामा थिएन । हामीले चाहेर के गर्ने ? अहिले पनि चाहेका छौं । उहाँहरूले जस्तो कसैलाई निस्कासन गरेर कुदिरहेका छैनौं । उहाँहरू यति उपद्रो गर्दै हुनुहुन्छ, यति अन्तरघात गर्दै हुनुहुन्छ, वामपन्थी आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै बिग्रहको खेती गरिरहनुभएको छ । तर, पनि हामी कसैलाई निकालिरहेका छैनौं । आफैं उहाँहरू किनारा लाग्दै हुनुहुन्छ । भन्न त नहुने हो, नमिले पनि जीवन शर्माको एउटा गीत सम्झिनुप¥यो जस्तो लाग्छ, ‘पिलो निचोरिँदैमा वजन घटेको हुन्न ।’ पिलो निचोरिन्छ, त्यसको खिल बाहिर जान्छ । वजन घटेको हुन्न ।
पार्टीमा तपाईंहरू कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, एकता गरेपछि कमिटीहरूले काम गर्न पाए ? तपाईंहरूले काम गर्न पाउनुभयो ? तपाईंहरूले गतिका साथ अगाडि बढ्न पाउनुभयो ? विभिन्न बाहनामा तपाईंहरूले खुट्टे लगाउने काम भयो । गाईगोरुलाई लगाइन्छ नि, त्यस्तै झुन्ड्याउने काम भयो । जनताका बीचमा स्पष्ट राजनीति लिएर जान नपाउने, संगठन एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न नपाउने गतिविधि भयो ।
हामीले एकीकरण ग¥यौं । तीन महिनाभित्र एकीकरणको काम टुंग्याउने निर्णय गरेका होइनौं ? त्यो तीन महिना कहिले आउँछ ? त्यतापट्टि कहिल्यै ध्यान गएन । दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेका हौं । गएको जेठ ३ गतेभन्दा उतै महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । सम्भवतः विधानको धारा १७ मा होला । तर महाधिवेशन गर्नेतर्फ कुनै सोच छैन । कुनै चिन्ता छैन । तयारी छैन ।
भुइँचालो जाँदा हामीले कार्यकर्ता परिचालन गर्ने । अरू पनि पार्टी हुँदा त्यसबेलाको सरकारले पनि केही पनि गर्न सकेन । तर हामीले हाम्रो कार्यकर्ता पंक्ति परिचालन गरेर आफैं एक कप चिया पनि खान नपाउने नियमका साथ बढो अनुशासित ढंगले एक महिनाको अभियान चलायौं । २७ हजार २ सय ७६ वटा अस्थायी टहरा बनाएर हामीले जनतालाई हस्तान्तरण ग¥यौं ।
लगभग १३ हजार विद्यालयहरू निर्माण गरेर हस्तान्तरण गयौं । २२ हजार हामीले भग्नावेशहरू सफा गर्ने काम ग¥यौं । जनतालाई अप्ठ्यारो परेका बेला ती कामहरू पार्टीले गर्न सक्छ । त्यस्ता राहतको काम गर्न सक्छ । तर, अहिले कोभिड–१९ को बिगबिगी छ, पार्टी केही गर्न सक्दैन । केही गर्न सक्ने अवस्थामा, कार्यकर्ता परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा पार्टी छैन । विरोध मात्रै गर्न सक्ने जस्ता विभिन्न प्रचारबाजीमा ।
हामीले त्यसको जवाफ पनि दिन पाएनौं । किनकि, हामी अनुशासित छौं । हामीले एउटा अनुशासन, मर्यादा, सुसंस्कृति कायम गरेका छौं । त्यसकारण, अब केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था आयो । पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था आयो । पार्टी सधैं रुमलिने अवस्था भयो ।
त्यसबाहेक, महाअभियोग लगाउने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, केन्द्रीय कमिटीबाट अध्यक्ष निकाल्ने, अरू नेताहरू निकाल्ने, यो बाटोतिर पो खेती गरिराख्नुभएको छ । पार्टी एकता, एकीकरण टुंग्याउने, एकीकरणको बाटोबाट अघि बढ्ने होइन, बरु उहाँहरू भत्काउने । कसैलाई निष्काशन गर्ने, कसैलाई कारबाही गर्ने । कुदेर राष्ट्रपति कहाँ पुग्ने । कुदेर सभामुखकहाँ पुग्ने । कुदेर कहाँ पुग्ने । यही प्रकारको खेती ।
त्यसकारण हामीले निश्चित समयभित्र लगभग ११ महिनाभित्र अब महाधिवेशन गरिसक्ने विचार गरेका छौं । हामीले चुनावमा पनि जानु छ । अब हामी चुनावको तयारीमा जुट्छौं । चुनावमा जान्छौं ।
अर्को, हामी चुनावपछि अरू कामहरूलाई बढी व्यवस्थित गर्नुछ । चुनाव अगाडि हामीले कमिटीलाई व्यवस्थित गर्ने र विभागहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, मातहतका कमिटीहरूलाई पुनर्गठन गर्ने यावत् कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी सबै कामहरू गरेर हामी चुनावका लागि तयारी गर्छौं ।
चुनावमा हामीले कम्तीमा ५० लाख लोकप्रिय भोट ल्याउनुपर्नेछ । समानुपातिकमा यति ल्याउनु छ । त्यो ५० लाख भोट हामीले ल्याउनुछ । हामीले दुई पार्टी मिलेर ११६ सिटमा जितेका थियौं । ११६ सिटमा जितेका थियौं भने अहिले त्यसमा ४ सिट थप्नु पर्नेछ । १२० सिट पुग्नुपर्नेछ ।
हाम्रो अभियान कुन हिसाबले हामी सञ्चालन गर्न सक्छौं, हाम्रो सफलता त्यसमा निर्भर रहन्छ । हामी एउटा आँधी तुफानका रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाएर लिएर जाँदै छौं । आँधी तुफानका रूपमा हाँकेर लिएर जाँदै छौं । हामी राजनीतिमा सम्पूर्ण ढंगले समर्पित भएर काम गर्छौं । हामी सही विचारको, सही उद्देश्यको तागत दुनियाँलाई देखाउँछौं । हामी हाम्रो एकताको बलको, एकताबद्ध सक्रियताको तागत देखाउँछौं । हाम्रो व्यापक पार्टी पंक्तिको परिचालन, त्यसको तागत देखाउँछौं । हामी त्यसैगरी जनपरिचालन गर्छौं । देशभक्तिमा के तागत हुन्छ ? राष्ट्रवादमा के तागत हुन्छ ? राष्ट्रिय स्वाभिमानमा के तागत हुन्छ ? त्यो हामी देखाउँछौं । हाम्रो स्वच्छता कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मूलन गर्ने हाम्रा इमान्दार उद्देश्यहरूको तागत र सुशासन, शान्ति कायम गर्ने हाम्रा नीति र व्यवहारको तागत के हुन्छ, हामी देखाउँछौं ।
हामी राजनीतिमा इमानदारिताको तागत देखाउँछौं । राजनीतिलाई तदनुसार सफल राजनीति, स्वच्छ राजनीति, इमानको राजनीति, देशभक्त राजनीति, लोकतान्त्रिक राजनीति, विधिको शासन भएको राजनीति, देश र जनताको हितमा केन्द्रित भएको राजनीति, यो राजनीति अगाडि बढाउँछौं र सफल हुन्छौं ।
यस्तो काम सञ्चालन गर्न हामीसँग सशक्त, विचारमा स्पष्ट र गतिशील पार्टी चाहिन्छ । त्यसर्थ मैले केन्द्रीय कमिटीमा केही साथीहरू थप गरेको छु । आन्दोलन टुक्राटुक्रामा विभाजित भएको अवस्थाबाट एकता, एकीकरण र पार्टी निर्माणको एउटा अभियान, आन्दोलन सञ्चालन गर्दै यहाँसम्म ल्याइपु¥याएको नेता, पार्टीको प्रथम अध्यक्ष र जनताले विश्वास गरेको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा । त्यो अध्यक्षको हैसियत हो, जसमाथि जनताले विश्वास गरेर अभिभारा सुम्पिएका छन् र त्यो अभिभारा असफल हुन दिनुभएको छैन ।
म प्रधानमन्त्री भएपछि नाकाबन्दीका विरुद्ध हामीले संविधान जारी ग¥यौं । संविधान जारी गरेबापत हमला भयो । नाकाबन्दी हामीमाथि लगाइयो । नाकाबन्दीविरुद्ध हामीले डटेर सामना ग¥यौं । त्यसबेला आलोचना र विरोध हामीविरुद्ध केन्द्रित गरियो
देशभक्ति मनमा नभएका, लोकतान्त्रिक चिन्तन नभएका, देश र जनताबारे कहिल्यै नसोच्ने, आफू, आफ्नो परिवार । खासगरी तीन पद, पैसा र परिवारबारे मात्र सोच्नेहरूको हातमा देश सुम्पिन सकिँदैन । त्यसकारण विघटनमा जानुप¥यो ।
अब यसपछिको परिस्थितिको हामीले कसरी सामना गर्ने ? उनीहरूले निहुँ त अगाडिदेखि खोजिरहेकै थिए, अब झन् उनीहरूले निहुँ बनाउँछन् । त्यो निहुँ बनाएर पार्टी विभाजन गर्न खोजिरहेका छन् र प्रयास गरिरहेका छन् । परामर्श पनि नगरेर अध्यक्षलाई निष्काशन गर्ने आदि इत्यादि गरिरहेका छन् । महाधिवेशन गर्नुपर्ने, गरिरहेका छैनन् । त्यतापट्टि लागिराखेका छैनन् । त्यसैले आगामी अभिभाराहरू पूरा गर्न सक्ने गरी कमिटीलाई थपेर विस्तार, अर्को भाषामा भन्ने हो भने पुनर्गठन गरेर विस्तार हो यो ।
तपाईंहरूले देखिहाल्नुभयो, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सबैलाई बोलाइएको छ, केही आउँदैनन्, उतै बैठक बसेका छन् । यसखालको अराजक स्थितिमा आन्दोलन जोगाउनका लागि को कतापट्टि बस्छ, छोडिदिऔं हामी । आन्दोलन जोगाउन मैले केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य विस्तार गरेको छु ।
अहिलेका कमिटीहरू निर्वाचित होइनन्, यी कमिटीहरू मनोनित हुन् । महाधिवेशनबाट निर्वाचित होइनन् । कुनै कमिटी पनि होइनन् । सबै मनोनित हुन् । यथार्थमा मौजुदा कमिटीहरू पनि यसै प्रक्रियाबाट, जसरी मैले हिजो साथीहरू थप गरें, त्यस उद्देश्यका लागि मैले ४४१ केन्द्रीय कमिटी, दुई जना आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य र चार जनापछि थपियो । ४४७ जना पहिले केन्द्रीय सदस्य र ५ सय ५६ जना मैले हिजो मनोनयन गरेका केन्द्रीय सदस्य गरेर १ हजार ३ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनेको छ । १ सय ९६ जना खाली राखेर १ हजार १ सय ९९ जनाको कमिटी बनाइएको छ । यो कमिटीपछि हेरफेर हुन्छ ।
अहिले हामी विशेष परिस्थिति, विशेष अभिभारा र विशेष अभियानमा भएको हुनाले हामीले कमिटीलाई अलिकति ठूलो पनि बनाउनुप¥यो । एकथरी मान्छेहरू विभाजनका लागि उद्दत छन् । त्यस कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुप¥यो । विभाजित भएर छुट्टियो नै भने पनि आन्दोलनलाई कमजोर हुन नदिनेगरी अगाडि बढ्नुप¥यो । अध्यक्षको नाताले मेरो कर्तव्य हो, पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा असफल हुन दिनुभएन । गतिहीन दिनुहुँदैन, आन्दोलनलाई सिद्धिन दिनुभएन । पार्टीलाई ध्वस्त हुन दिनुभएन । त्यसकारण मैले यो सदस्यहरू थपेको छु ।
मौजुदा कमिटीले पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्नेमा फुट, अनेकता र विभाजन तथा गुटगत क्रियाकलापलाई रोक्न सकेन । खराबी र क्षतितर्फका केही व्यक्तिको यात्रालाई पनि रोक्न सकेन । तिनका प्रयासलाई असफल बनाउन सक्नुपथ्र्याे कमिटीहरूले तर सकेनन् ।
सहमतिका साथ एकीकरणका कार्य सम्पन्न गर्दै सहमतिका साथ नै एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा त्यो बाटो नै नलिई गुटबन्दी, अस्वस्थता, अनुशासनहीनता र अराजकताको सिकार भएर र फुटको निम्ति औजार हुने वामपन्थी आन्दोलन र नेकपालाई नै गम्भीर नोक्सान पु¥याउन सक्ने, समाप्त पार्न सक्ने खतरा यी कारणहरूले पैदा भयो ।
आन्दोलन र पार्टी बचाउन एवं जनताका व्यापक हितहरूको रक्षा गर्न मौजुदा कमिटीहरू राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीभित्र समेत बाह्य घुसपैठ र हस्तक्षेप रोक्नसमेत असमर्थ रह्यो । तसर्थ यस्तो स्थितिमा राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्न मौजुदा कमिटीहरूले पार्टीलाई वैचारिक एकतातर्फ बढाउनुपर्नेमा विभिन्न तŒवले फैलाएका अन्योल, अस्पष्टता र भ्रमहरूलाई चिर्न विल्कुलै असफल रह्यो ।
पार्टीमा मान्यता, विधि, पद्धति, गोपनीयता र अनुशासनजस्ता विषयहरू हिजोको इतिहास र आजका लागि अनावश्यक कुराजस्ता हुन पुगे । जसले गर्दा पार्टी, पार्टीका रूपमा नरहेर एउटा असंगठित, अराजक र दिशाहीन जमातजस्तो हुने खतरा बढ्यो । त्यसलाई अविलम्ब रोक्नका लागि, पार्टीलाई विचारमा बाँधिएको, देश र जनताको हितमा समर्पित, उद्देश्ययुक्त, सही बाटो पहिल्याएको र त्यसमा यात्रारत गतिशील बनाउनुपर्नेमा विचारहीन, स्वार्थी र अलपत्र जमात बन्ने खतरा पैदा भयो ।
(प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बालुवाटारमा आयोजित आफ्नो समूहको केन्द्रीय समितिको बैठकमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।)
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो बिदाइ मन्तव्यमा असार २९ गते नेपालले थप १ करोड ५० लाख डोज खोप सहुलियत दरमा खरिद सम्झौता गरेको...
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी हुने भएको छ । माओवादी केन्द्रबाट भरत साह आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री...
वुहानबाट नेपाल फर्किएका १७५ जना के गर्दैछन् खरीपाटीमा
काठमाडाैं । चीनको वुहानबाट फर्काएर नेपाल ल्याइएका १७५ जनालाई भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालीम केन्द्रमा निर्माण भएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । ...
विवाह गर्ने आश्वासन दिएर १३ वर्षिया बालिका बलात्कार
गार्सिया बार्सिलोना फर्किए
कोहलीको टिम ९७ रनले पराजित